मोडलिङ समाजको ऐना हो « मेचीखबर
मोडलिङ समाजको ऐना हो
१६ श्रावण २०७३, आईतवार १३:५१
ग्ल्यामरको दुँनियामा मोडलिङ एक ऐना हो, जुन फेसन सो को माध्यमबाट आफ्नो व्यक्तित्व, बौदिक्ता अनि सौन्र्दयताको बिकास गराइन्छ अर्थात एउटै शब्दमा भन्ने हो भने मोडलिङ एक अलग्गै छुट्टै पहिचान हो । समाजमा यसको छुट्टै पहिचान छ । जस्तै डाक्टर, इन्जिनियर, आदि, इत्यादी ।
बिगत १५ बर्षदेखि ग्ल्यामरसको क्षेत्रमा पूर्वमा नेतृत्व गर्दै आएको एक यस्तो संस्था हो जो कोही बालबालिका तथा युवायुवती अछुतो रहेका छैनन् । जुन गाउँवेशी, सहर बजारमा सवस्त्र फैलिएको छ । संस्था सञ्चालन गरी बालबालिकामा भएका प्रतिभा प्रस्फुटन गराउँदै आएका झापा कन्काई नगरपालिका वडा नं.–८ का आशिम ज्वयल (अर्जुनकुमार श्रेष्ठ ) सँग संक्षेपमा मेची खवर अनलाइनले गरेको कुराकानी :
भरखरै मात्र ६ बर्षदेखि १५ बर्षसम्मका बालबालिकाहरुको कार्यक्रम लिटिल प्रिन्स एण्ड प्रिन्सेस सकि अवको नयाँ कार्यक्रम साउन २० गतेदेखि दमकमा मिस प्रिन्सेस नेपालको तयारीमै व्यस्त छु ।
२) अहिलेसम्म तपाईको संस्थाले कतिजना बालबालिकालाई सहभागि गराएको छ ?
बिभिन्न उमेर समुहका अहिलेसम्मको दौडानमा लगभग पाँचहजार बढीको सहभागिता गरिएको छ ।
३) तपाई संस्थाले कति उमेर समुहका बालिकालाई सहभागि गराउँछ ?
आवश्यकता अनुसार बालबालिकादेखि वश्यकसम्मका उमेर समुहका रहने छन् ।
४) एक महिनासम्म बन्द प्रशिक्षणमा राखेर बालबालिकासँग छुट्टिदाको अवस्था कस्तो हुन्छ ? तपाईको अनुभवमा ।
साच्चै नै गम्भिर प्रश्न नै राख्नु भयो । यो सम्झिदा त लाग्छ मिलनपछिको बिछोड नभए पनि हुन्थ्यो । तर, बाध्यताले गर्दा छोड्नु पर्दाको अवस्था साह्ै नै दुःख लाग्छ ।
५) वास्तवमै बालबालिकासँग क्षमता हुन्छ कि तपाईको संस्थाले उनीहरुलाई क्षमतावान् बनाउँछ के लाग्छ तपाईलाई ?
जसरी कस्तुरीमा आफ्नो सगन्ध हुन्छ त्यस्तै नै बालबालिकामा प्रतिभा हुन्छ । जसरी कस्तुरीको सुगन्ध उसलाई थाहा हुँदैन तर, भौतारिएर दौडिरहेको हुन्छ । त्यस्तरी नै बालबालिकामा पनि अनेक किसिमका प्रतिभाहरु छन् त्यसलाई हामीले उजागर गरेर क्षमतावान् बनाएर दुँनियामा राज गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिन्छौ । जस्तै नृत्यमा तेरिया फौजा मगरको उदाहरण लिन सकिन्छ भने विश्वको सबैभन्दा कान्छो फिल्म निर्देशकको रुपमा सौगात बिष्टलाई लिन सकिन्छ । त्यसैले त बालबालिकासँग प्रतिभा हुन्छ । तर त्यो प्रतिभा देखाउने स्थान पाउन सकेका हुँदैनन् । त्यस्ता बालबालिकालाई हामी त्यो ठाउसम्म पुर्याउन मद्दत गर्छौ ।
६) तपाईको संस्थाले अहिले सम्ममा नेपालका कतिवटा जिल्लामा कार्यक्रम गराएको छ ?
पूर्वाञ्चलका अधिकांश जिल्लामा कार्यक्रम गरिसकेको छ ।
७) के यो क्षेत्रलाई अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्छ जस्तो लागेको थियो तपाईलाई ?
वास्तवमा यो भन्दा अघिदेखि नै यो अवस्थामा आइपुग्नु पर्ने हो तर भरखर मात्र बिभिन्न शिर्षक नाममा कार्यक्रमहरु ऋायोजना हुँदै आइरहेको छ ।
८) के यो क्षेत्रबाट सन्तुष्ट हुनुन्छ ?
वास्तवमा सन्तुष्ट नै छु किन कि सम्पूर्ण व्यक्ति बिशेषसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क भइरहन्छ । अझ मिडीयसँग त धेरै नै नजिक छु ।
९) अन्त्यमा तपाई के भन्नु हुन्छ ?
‘एजुकेशन फर द चेन्जीङ्ग’ इच्छा, आकांश र तत्वरता भए स्वागत छ हाम्रो सञ्सारमा ।